Waa tuma Saxarla C/llaahi: Gabadhii ugu horreysay ee SOOMAALI ah ee xildhibaan ka noqota Addis Ababa? - Caasimada Online
Home Warar Waa tuma Saxarla C/llaahi: Gabadhii ugu horreysay ee SOOMAALI ah ee xildhibaan...
Waa tuma Saxarla C/llaahi: Gabadhii ugu horreysay ee SOOMAALI ah ee xildhibaan ka noqota Addis Ababa?
Addis ababa (Caasimada Online) – Saxarla Cabdullaahi Bahdoon ayaa noqotay inta taariikhda la ogyahay qofkii ugu horeeyey oo Soomaali ah oo Xildhibaan loogu doorto Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Saxarla Cabdullaahi ayaa hadda ah wasiiru dowlaha arrimaha caafimaadka dowladda federaalka ee waddanka Itoobiya.
Waxay kusoo baxday cod aqlabiyad leh kadib tartan adag oo ka dhacay doorashadii bishii hore loo galay kursiga Xildhibaanimo ee Xaafadda Yeka ee magaalada Addis Ababa.
Saxarla Cabdullaahi waxa ay ku tartamaysay tigidka xisbiga EPP ee talada haya kaas oo ku guulaystay 410 kursi oo ka mid ah 436 kursi ee loo tartamay, sidaasna uu ugu guulaystay in xafiiska uu sii hayo muddo xileed shan sanadood ah.